လမ်းခွဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » လမ်းခွဲ	6
Posted by naywoon ni on Jan 1, 2015 in Poetry |6comments
ခရစ်​နှစ်​အသစ်​နဲ့ ​တွေ့ရ​တော့မယ်​ ။
အစဉ်​အလာမပျက်​ ခရီးဆက်​ကြဦးမှာလား ?
မင်းတို့ရဲ့ အ​တွေးအ​ခေါ် အယူအဆ​တွေက သစ်​မှမလာပဲ ။
အစဉ်​အလာ ဓေ​လ့ထုံးစံ ​တွေနဲ့ ယိုင်​နဲ့
မနှစ်​ကလိုပဲ ဒီနှစ်​တစ်​နှစ်​ကို ဖြုန်းတီးပစ်​လိုက်​ကြဦးမှာ …….
အ​တွေးအ​ခေါ် အယူအဆ အ​ပြောင်းအလဲ
ဓ​လေ့ထုံးစံ အစဉ်​အလာရဲ့ လမ်းခွဲ
ဘယ်​သူအရဲစွန့်​ထွက်​ရဲသလဲ ? ​နေ၀န်းနီ
Maung Thura says: အစဉ်အလာထဲက ဖောက်ထွက်တဲ့အစဉ်အလာထဲမှာ… ကျနော်ရှိနေတယ်..
CharTooLan says: အမ်းးးးးးးးးးး ကျော်တော့မထွက်ရဲပေါင် ဒီတခါက လေးနီထွက်ကလဲ့ :P
kyeemite says: .နှစ်သစ်နဲ့ လူဟောင်းဆိုတော့
.အစိုးရသစ်နဲ့ လူဟောင်းတွေ ပြေးမြင်မိတယ်ဗျ .ဒီမိုအစိုးရသစ်လို့သာပြောတယ် အရင်ကလူဟောင်းတွေဆိုတော့ ဆြာနီပြောသလို..
.အ​တွေးအ​ခေါ် အ​ဟောင်းအမျင်း​တွေနဲ့ပဲ သွားနေတော့ လိုရင်းပန်းတိုင်မရောက်နိုင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကျွန်မ ထွက်ရဲ တယ်။
ဒီ ရွာထဲ မှာ။
ဟိ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: သစ်လို့ရတာတွေပဲ သစ်ကြတာပေါ့လေ။
Yae Myae Tha Ninn says: ဒီနှစ်က အနော့်ရဲ့ ထိပ်စီးပြောင်းတဲ့ နှစ်… ပြတ်သားသင့်တာ ပြတ်သားရတော့မယ်…ဒါဟာလဲ ပုံသေလို့ အနော့်ကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ သူတွေအတွက် ဖောက်ထွက်ခြင်းပဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.